Kwisongelo elivela ngaphandle, umzimba wethu uninzi usabela ngexinzelelo. Enyanisweni, imeko ebalulekileyo, nokuba ingozi ebomini, imeko engxamisekileyo yokuxabana, ukulwa okunokwenzeka - oku kungumqondiso ozayo emzimbeni wethu kwaye kubangele ukukhululwa kwama-hormone oxinzelelo kwigazi elivumela ukuba silungiselele imfazwe okanye iindiza. Le ndlela ifumaneka kuthi kwindalo, kodwa imeko yangoku kukuba zonke iingxaki kufuneka ziphendulwe ngale ndlela.
Zigwebe ngokwakho: ukuba uya kukhishwa, ngaba umfazi wakho uya kuqinisekisa ukuba ulunge lwakhe? Umyeni akenzi nto ekhaya? I-Nestanem siyabaleka kuloo meko, njengokuba sisuka kumlilo okanye kumdlali onamandla. Nangona sifunde ukuba sifunde njani le meko, nangona kunjalo, kwintlangano yethu kukho iindlela ezininzi zezilwanyana kwaye xa kukho iingxaki kwizinga lomzimba, asinakuchaphazela oko. Isiphumo sixinzelelo, ngenxa yokuba awufuni ukusebenza, ewe kunye nobomi ngokubanzi abuyi kuvuyisa.
Iingcali ziye zatshengisa ukuba ukunyamezeleka okungapheliyo kubangela ukuphuhliswa kwezifo ezinzulu ezifana nokukhuluphala, isifo sikashukela, umfutho wegazi. Kwaye ukuze siphile ixesha elide, kunye nentlungu encinci kunokwenzeka, kuyimfuneko ukulwa noxinzelelo. Indlela yokwenza ngayo, siya kukuxelela kamva.
Enye yeendlela ezilula ukukhupha ingcinezelo yileti eluhlaza. Ukuba awuyithandi, nayiphi na iqela elimnyama elungileyo, elungileyo, namhlanje kuma-shelf unokufumana iintlobo zeetayi, malunga neminyaka engama-3-5 edlulileyo asizange sikuve.
Ungakwazi ukujongana noxinzelelo ngokuqulunqa isithethe, into enjengomkhosi wakho weeyi. Ngoko, unokuthenga umpheki omhle, umbophezele iipilisi ezintle, ukhethe indebe enomdla. Ngexesha lokuphuza isiselo esiqholiweyo, zigwebe ukucinga ngeengxaki, willow ubone ukuba kuba lula kumphefumlo.
Kuphawulwe ukuba abantu abanengcamango eyintandokazi, bancitshiswa kakhulu ukuxinzezeleka. Ngokuqinisekileyo, abantu abathile banenhlanhla basebenza njengento yokuzonwabisa, kodwa abanye baya kucinga ngomsebenzi othabatha umdla, ngexesha apho uza kuhlaziywa ngokupheleleyo kwinkqubo kwaye uyalibale malunga neengxaki ezikhokelela ekufuneni kwakho. Gwema ixesha lokwenza umsebenzi omnandi unokuzibhaptiza ezinkumbulo zexesha eliqaqambileyo nelona libalaseleyo, zama ukucwangcisa ikusasa. Cinga kwakhona malunga nokokukuvuyisa, kungakhathaliseki ukuba kwakubaluleke kangakanani ebomini bakho. Mhlawumbi uthanda ukukhula iintyatyambo zangaphakathi, izibhande ze-embroider okanye udwebe kakuhle? Ngoko kutheni umsebenzi ozithandayo ushiywe?
Ukwandisa ukuzithemba kunye nokuphelisa uxinzelelo, kwaye uqhagamshelane nabantu abanomdla ofanayo ababelana ngesondo sakho. Mhlawumbi kwidolophu yakho kukho iiklabhu apho abantu abanomdla wokufanayo. Ukuba akukho sondeza eshushu, unokufumana lula abantu abonwabela izinto ezifanayo njengawe kwi-intanethi.
Ngamnye wethu, obani ubuncinane oye wafumana uxinzelelo, uyazi ukuba kweli lizwe kunokwenzeka ukuba akunakwenzeka ngokuqhelekileyo ukugxila ekusebenzeni kwanoma yimuphi umsebenzi. Masizame ukwenza izinto ezintle: xa unomuva wokuba uninzi kwaye uza kuphazamiseka ngumtshatya wokuxhatshazwa, odla ukubonwa phantsi koxinzelelo, zama ukugxila. Kukho nokuzivocavoca ezithile okuvumela ukuba ugxininise kwimibandela yemizuzu. Enye yokuzilolonga ngolu hlobo lulandelayo: kufuneka uhambe ekamelweni elingenanto, uhlale esihlalweni uze ucinge ukuba akukho nto ijikeleze kuyo. Emva kokuqeqeshwa, le nqubo ikuvumela ukucima intloko yazo zonke iingcinga ezimbi. Unokwandisa umphumo ngokuqala isibalo ukusuka ku-0 ukuya kwe-10, ngaphandle koko kufuneka ubale ngokukhawuleza, ngelixa uzama ukucinga malunga nantoni na. Xa isibalo sidlulile, kufuneka uvuke esihlalweni uze ulwe. Nangona kunzima kakhulu kulo msebenzi, kusebenza kakuhle.
I-anti-depressant enamandla yimidlalo. Ukuya kwindawo yokuzivocavoca, unokwazi ukuphosa ngaphandle zonke iimvakalelo eziphazamisayo, ziyeke iimeko ezifanayo. Ukongezelela, olo xinzelelo luya kupheka, njengobhonasi uya kufumana isilinganiselo esincinci kunye nokuzithemba.
Ngokuqhelekileyo, abantu abanesifo esibi, zama ukunceda abanye. Le ndlela iphumelela kunyango loxinzelelo, kuba kunceda umntu othe wancinci ebomini bakho kunokuba wena, kufuneka uqaphele ukuba ubomi buhle kwaye bufanele ukuzonwabisa.
Oogqirha kunye nabantu ababandakanyekayo kwimisebenzi yaseMpumalanga baqaphele ukuba unokulungisa impilo yakho ngoncedo lweempawu zokuphefumula ezikhethekileyo. Ngexesha elifanayo akudingekile ukuba ujoyine i-yoga, ufunde ezinye iindlela eziyinkimbinkimbi ezikunceda ukuzincama, okwaneleyo ukufunda ukuphefumula ngesantya esithile: ubude be-exhalation ngexesha kufuneka libe kabini ngeli xesha ixesha lokuphefumlelwa. Ngokomzekelo, ukuphefumula, ungakwazi ukubala ukuya kwi-3-4, kunye nokuphefumula-ukuya ku-7-8.
Abantu abaninzi banzima ukuxinezeleka kwaye bathande isilwanyana. Ukuze ube nomhlobo obalaseleyo, akunakulungelekile ukugcina imali yentsimbi enqabileyo okanye intshontsho-imvumba eqhelekileyo, ithathwa kwidide okanye inikwe ngabahlobo, iya kuba yothando kwaye izinikezele.
Kwaye enye enye ingcebiso ebalulekileyo: Ukugxininisa uxinzelelo awuyi kuphelisa iingxaki ezikuqhubezelayo, kodwa uza kufumana iipounds ezili-imwe, okanye iipounds ezili-12. Cinga ngolu hlobo. Kwaye ukuba awunakho ukukhuthazwa okwaneleyo ukwenzela ukuyeka ukuthanda izinto ezikuvumela ukuba ujabule, uye kwiindawo zaseMerika uze ubone indlela abafazi babo babheka ngayo. Kuphela, chur, ungazifanisi kunye neenkwenkwezi zaseHollywood ezichitha iinyanga kwiidlo ezidakisayo kunye nesiqingatha somhla ekuhambeni kwimizimba yabantu. Jonga amabhinqa aqhelekileyo, indlela ekhangeleka ngayo, ukunyamezela ngokutya rhoqo kunye neeskese ezahlukeneyo kunye nezinye iimveliso ezingenasiphumo somzimba.
Ukuba ufumana uxinzelelo, oku akuthethi ukuba akuvumelekile ukuba ulwe nokutya. Isidlo esiphezulu seekhalori. Kodwa ukuba unganqabana nokuqhagamshelana nomculi wezilwanyana, onguchwepheshe onokwazi uza kukwazi ukuphuhlisa imenyu eya kunceda ukuba ingagqithisi kuphela imiphumo yeemeko ezixinzelelekileyo, kodwa iphinde iphucule impilo.
Kwaye, ke, indlela efanelekileyo kakhulu yokulwa noxinzelelo yothando nothando. Ngaba ucasulwa yile okanye imeko? Ulibale eengalo zentanda yakhe! Umphathi ubamba amaxhoba? Mthumele ngezwi kwaye uchithe ubuncinane ngosuku olunye, uzinikezele kwesinye isiqingatha kwaye ubone ukuxinezeleka, kungakhathaliseki ukuba kwenzeka ntoni.
Unyango lwe-gout kunye nezindlela zabantu
Ubomi emva kokususwa kwesibeleko
Uthando lweHoroscope ngo-Matshi 2014: Uvuyo lwamaRoma
Ziziphi iintlobo zezilwanyana ezithandwayo?
5 izingozi eziphambili zombono ebusika
Impahla ingayitshintsha njani ubomi bakho?
Ungatshintsha njani umfanekiso kwaye uthathe okulungileyo?
Intambo yokuqaqa yinkomfa elula kwikhaya lakho
Ukukhusela imithetho ngexesha le midlalo kunye nesihlabathi